Muxuu Yahay Isbaddalka Jidhkaaga Ku Yimaada Marka Aad Sooman Tahay? |
Muxuu Yahay Isbaddalka Jidhkaaga Ku Yimaada Marka Aad Sooman Tahay?
Sannad walba malaayiin Muslimiin ah oo daafaha dunida ku kala nool ayaa bisha Ramadhaan sooma 30 maalmood oo xiriiri ah qorraxdu inta aysan soobixin ila inta ay ka dhaceyso.
Sanadihii u dambeeyey waddamada qaar wuxuu Soonka bisha Ramadhaan uu ku soo beegmayaa xilliga xagaaga, oo sannadkan 16-May ka billaabanaya dalka Britain.
Taa micnaheedu waxa weeye, waddamada ay ka midka yihiin Norway waxay Muslimiinta dalkaasi ku nool ay soomaan 20 oo sacadood maalin walba.
Haddaba soonka 30-ka maalmood ee aad soontid bisha Ramadhaan ma yahay mid caafimaadkaaga u wanaagsan? Haddaba halkan ka akhriso waxa jirkaaga uu la kulmayo markaad 30 maalmood oo xiriir ah aad soontid.
Qaybaha ugu adag- maalmaha ugu horreeya soonka
Marka la eego jirka banii aadamka sida uu u shaqeeyo jirkaaga xaalad soon ma galayo ilaa 8 saacadood ay ka soo wareegto xilligi kuugu dambeysay cunto.
Saacadahaasi oo loo badiyo xilliga uu jirka dhameysanayo nafaqadi ugu dambeysay ee uu ka helay cuntadii kuugu dambeysay ee aad cuntay.
Wixi siddeedda saac ka dambeeyana wuxuu jirkeennu billaabayaa inuu tamar ka soo qaato gulukooska ku keydsan beerka iyo seedaha jirkeenna.
Tamarta gulukooska haddeey dhammaatana wuxuu jirka tamar ka raadsanayaa baruurta jirkeenna ku keydsan.
Jirka marka uu billaabo inuu baruurta jirka ku keydsan uu gubo, waxay qofka ka cawineysaa inuu miisaankiisa dhimo, inuu dufanka jirkiisa ku jira uu yaraado iyo iney yaraato khatarta uu macaanka ugu jiri lahaa.
Inkasta oo sokorta dhiigga ku jirta oo yaraata ay keento tabardarro iyo murugo.
Waxaadna la kulmeysaa madax xanuun, wareer (dawakhaad), lallabbo iyo neefta aad neefsaneysid oo isbeddel uu ku yimaaddo.
Waxayna inta badan arrimahasi dhacaan marka gaajada ku haysa ay aad u darnaato.
Ka taxddar in jirkaaga fuuq bax uu soo wajaho (3-7 maalmood ee soonka ugu horreysa)
Marka uu jirkaagu billaabo soonka, baruurta jirkaaga ku jirta aya gubaneysa waxayna isu beddeleysaa sokorta dhiigga.
Iticmaalka dareeraha waa inaad ku dadaashaa inta aad ku jirto bisha soomka, haddii kale waxaa dhici karto inaad la kulanto fuuq bax oo ay caafimaad darro ku soo wajahdo.
Cuntooyinka aad isticmaaleysid xilliga afurka waa iney ahaadaan kuwa ay u dhan yihiin ‘cunnooyinka tamarta’ iyo xoogaa baruur ah.
Waxaana aad u wanaagsan inaad cunto isku dheellitiran sida borotiinka, cusbada iyo biyaha.
Maalmaha 8-15 ee soonka
Qaybtan markaad mareyso, waxd arkeysaa isbeddel wanaagsan oo ku yimaadda jirka maadaamaa uu la qabsanayo Soonka.
Dr Razeen Mahroof, oo dhakhtar ku takhasusay dawooyinka suuxdinta iyo daryeelka caafimaadka oo ka shaqeeya Isbitaalka Addenbrooke ee ku yaalla Cambridge, wuxuu sheegay in soonku uu faa’idooyin kale uu leeyahay.
Cuntooyinka Kaalooriga oo aan isticmalno waxay jirkeenna awood u siinayaan iney infection uu ka hortago
“Maalmaha caadiga ah ee soonka ka baxsan waxaan isticmaalnaa cuntooyin kaalori oo aad u badan, taasoo ka hortageyso in jirku uu sida ku habboon u shaqeeyo.”
“Balse arrimahaasi oo dhan jirka waa uu saxayaa, wuxuuna awood u yeelanayaa inuu howl maalmeedkiisa caadiga ah uu qabsado.”
“Marka soonku wuxuu jirka ka faa’idayaa inuu ka hortago infection jirka ku dhici lahaa.”
Sunta oo uu iska saaro – 16-30 ee soonka
Shan iyo tobanka dambe ee Ramadaan wuxuu jirka qofku si buuxda u ula qabsanayaa marxaladda soonka.
Soonka marka uu halkaasi marayo xiidmaha, beerka, kalliyaha iyo maqaarkaba waxay billaabayaan iney iska saaran sunta ku jirta oo horay ugu uruursaneyd.
Dr Razeen Mahroof wuxuu sheegay soonka dheer ee looga danleeyahay hilib dhimista uu wanaagsaneen
“Caafimaad ahaan soonka marka uu halkaasi marayo xubanaha jirka oo dhan waxay u shaqeeynayaan sida u wanaagsan. Waxaana si weyn kor ugu soo kacayo xusuustaada iyo dareemahaaga marka waxaad u baahan tahay iney cunnooyin aad tamar badan ka heleysid aad qaadato.” ayuu yiri Dr Mahroof.
Haddaba, Soonku ma u fiican yahay caafimaadka?
Dr Mahroof wuxuu leeyahay haa, balse xaalado ayaa weheliya.
“Soonka caafimaadkeenna wuu u wanaagsan yahay sababta oo ah wuxuu naga caawinayaa inaan ahmiyadda siinno waxa aan cuneyno iyo xilliga aan cueneyno. Si kastaba ha ahaatee, soonka sanadkii hal bil la soomo waa uu wanaagsn yahay, balse soonka intaa ka dheer qofka lagulama talinayo”.
Soonka bisha Ramadhaan wuxuu kaa caawinayaa inuu jirkada isku dheelli tirto tamart uu maalinka u baahan yahay
“Soonka dheer ee uu qofka hilibka isaga dhimayo waxa aan loo ammaaneyn ayaa waxay tahay, jirkaaga marka uu soonka ku bato wuxuu joojinayaa inuu baruurta u beddelo tamar, wxayna baruurta isu beddeleysaa seedo, taasoon u wanaagsaneyn caafimaadka iyo muuqaalka qofkaba.”
Bisha Ramadaan oo aad si sax ah u soonto cunnooyin isku dheelli tiranna aad isticmaasho, waxay qofka u suuragelineysaa inuu jirkiisu uu isku miisaamo tabarta uu maalintii u baahan yahay, miisanka jirkaagana wuu isku dheelli tirmayaa iyada oo wax seeeda ahna aysan jirkaadu ka sameeysmin.”